China Water base akwụkwọ tube isi mama factory na suppliers | .BỌCH.
Agba milky ọcha oke mmiri mmiri
Ihe ndị bụ isi bụ mmanya polyvinyl, kaolin, wdg
Ihe siri ike nke 25% ma ọ bụ karịa
Mgbakwunye nke 35 ~ 60 s
Adị ndụ> ọnwa 4
Okpomọkụ> 0 ℃
Nchekwa nchekwa BBB 0 5 ℃
Na-echekwa ebe dị jụụ na nke gbara ọchịchịrị, kaa akara ma kaa akara
Ọdịdị: Milky na-acha ọcha viscous emulsion
Ihe siri ike: ≥25%
Viscosity: 50 ~ 100s (iko 4 kpara, 25 ℃)
Oge ibibi eriri akwụkwọ: Minute 1 nkeji
Akwụkwọ tube mama
Emere ya site na mmanya polyvinyl, kaolin na obere ihe.
1: Strong mbụ adhesion, ngwangwa ọgwụgwọ oge （oge na gluu akọrọ). N’ime nkeji atọ na ise, ogo ahụ nwere ike isicha ike mgbe adọwara ya n'ike. mgbe ịgbakwunye mama nwere ike ime ka mpempe akwụkwọ tube isiike, na iguzogide elu nsogbu.
2: N'ihi na akụrụngwa gụnyere kaolin nke ọnụ ala dị ọnụ ala naanị 260 USD / ton, ndị na-emepụta tube tube nwere nnukwu ọchịchọ maka ya.
Ọdịdị Milky ọcha ìhè edo edo
24% siri ike
Oge ọgwụgwọ: 24 awa
Adị ndụ ọnwa isii
Nke anọ, ihe gbasara ngwa
1: kinddị gluu a nwere ike iji ya mee ihe site na imikpu ma ọ bụ ịgba, nke a na-eji na usoro mmepụta nke eriri yarn, pagoda tube, eriri eriri kemịkal, eriri teepu, ikpuchi akwụkwọ, wdg.
2: Ọ bụrụ na ọkpụrụkpụ nke ọkpọ tube bụ 3-8 mm, enwere ike gwọọ ya na ụlọ okpomọkụ. Ọ bụrụ na n'elu 12 mm chọrọ oven ka mee ngwangwa ọgwụgwọ.
3: Nke a na ụdị mama nwere ike ji mee na ngwa ngwa pagoda tube mmepụta akara.
1. Nnukwu akwụkwọ tube tube gluu bụ ngwaahịa na-adabere na mmiri, nke dị mma iji ya ma ghara ịkpata mmetọ gburugburu ebe obibi.
2. Mmiri ahụ na-ekpochapu ngwa ngwa, na mgbe emechara mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere obere shrinkage, obere nrụrụ na mkpụrụ dị elu.
3. Ihe siri ike dị ukwuu, nke na-ebelata oge ihicha ma belata oge mmepụta;
4. Short mbụ sticking oge, adabara na-amalite coils na dị iche iche gbapụrụ ọsọ, akpụ otu oge, rụọ ọrụ nke ọma na mbenata ike osisi;
5. High bonding ike: The compressive ike, mmiri na-eguzogide na ntu oyi na-eguzogide nke akwụkwọ tube mepụtara a gluu na-elu karịa ndị na-emepụta site ọzọ roba ụdị!
6. Green na nchedo gburugburu ebe obibi: Ogologo oge eji mpempe akwụkwọ tube a adịghị emerụ ahụ mmadụ ahụ, ngwaahịa mmepụta ahụ kwekọrọ n'ụkpụrụ mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ;
7. Nguzogide oyi siri ike, ezigbo mmiri mmiri na 0 ℃, enweghị gelation.
8. Ezi nchekwa nchekwa. Echekwala na ụlọ okpomọkụ ihe karịrị ọnwa 3 na-enweghị delamination ma ọ bụ njọ.
1. Kwesịrị ekwesị maka ụdị dị iche iche nke tube na akwụkwọ mpempe akwụkwọ, nke a na-eji eme akwụkwọ tubes, isi akwụkwọ, akpa akwụkwọ, akpa akwụkwọ eji eji kemịkal kemịkalụ, ịkpụcha akwụkwọ, plastik, nkwakọ ngwaahịa, textile, obibi akwụkwọ na ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ;
2. Adabara iche iche ụdị nke akwụkwọ akuku nchedo mmepụta edoghi;
3. Adabara na-eme dị iche iche akwụkwọ nche, n'ụgbụgbọ mmanụ a paperụ akwụkwọ cores, akwụkwọ trays, wdg;
4. Adabara elu-ọkwa katọn na katọn mmepụta ahịrị;
5. Adabara dị iche iche ntuziaka na akpaka pagoda tube n'ibu coiling;
6, diluted na mmiri nwere ike iji mee ihe maka mmiri
Ngwaahịa mmiri nwere nchekwa iji ya na anaghị ebute mmetọ gburugburu ebe obibi
Mmiri volatilization ngwa ngwa, mmepụta nke mpempe akwụkwọ tube shrinkage rate is low, obere mgbanwe, mkpụrụ dị elu
Nnukwu ihe siri ike, na-ebelata oge ihicha, belata usoro mmepụta
Ike oyi siri ike, ezigbo mmiri mmiri na ọnọdụ 0,, enweghị mgbatị
Ezigbo nchekwa nchekwa, nchekwa ụlọ n'ime ihe karịrị ọnwa 3, enweghị nkedo, enweghị njọ
High bonding ike: akwụkwọ tube emepụta site a mama nwere elu compressive ike, mmiri na-eguzogide na ntu oyi na-eguzogide karịa na-emepụta site na ndị ọzọ di iche iche nke mama
Nso nke ngwa
Kwesịrị ekwesị maka ụdị akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị iche iche, eriri mmepụta akwụkwọ, nke a na-eji maka mmepụta nke eriri kemịkal, akwụkwọ, plastik, nkwakọ ngwaahịa, textile, mbipụta na ụlọ ọrụ na-agba agba dịka tube akwụkwọ, isi akwụkwọ, tube akwụkwọ, akwụkwọ nwere ike.
Adabara na-eme nile di iche iche nke akwụkwọ nche osisi, n'ụgbụgbọ mmanụ abụ akwụkwọ isi, akwụkwọ tree na ndị ọzọ na mmepụta ahịrị.
Nke gara aga: Universal mama / Super SBS All-nzube General nrapado gluu
Osote: S168 Silicone Sealant Weather-eguzogide nrapado Construction Weather-eguzogide akara maka mpụga mgbidi, ụlọ, ibo ụzọ na windo